Man United Oo Barbaro Niyadjab Ah La Gashay Wolves, Kulan Ku Celis Ah Oo Lagu Qasbay & Man City Oo Xasuuqday Port Vale
Sunday January 05, 2020 - 00:26:37 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Man United waxaa lagu qasbay in kulan ku celis ah ay la ciyaari doonaan kooxda Wolves taas oo jadwalka
Red Devils culays ku sii kordhin karta.
Wolves lafteeda ayaa ka shalaynaysa in ayna fursadihii ay ku abuurtay garoonkeeda ayna guul kaga gaadhin Man United waxayna labada kooxood heli doonaan fursad ay markale iskugu soo laaban karaan.
Man United ayaa marti u ahayd kooxdii xili ciyaareedkii hore ka reebtay isla koobka ay kulankan kaga hor yimaadeen ee FA Cupka wuxuuna Solskjaer raadinayay in uu markii ugu horaysay isaga oo tababare ah guul ka gaadho kooxda Wovles.
Qaybtii hore ee ciyaarta waxay labada kooxood awoodi kari waayeen in ay wax goolal ah kala dhaliyaan laakiin waxaa jiray fursado cajiib ah oo ay goolal ku dhalin kareen.
Goolhaye Sergio Romero ayaa muujiyay in uu booska kowaad kula tartami karo David De Gea kadib markii uu kooxda Wolves ka beeniyay gool ay hogaanka ciyaarta kula wareegi kareen.
Halkan ka daawo muuqaalka badbaadintii cajiibka ahayd ee uu Romero ka sameeyay Wolves.
Laakiin qaybtii hore oo kaliya labada kooxood fursado may khasaarin balse ilaa qaybtii labaad waxaa sii socotay fursad luminta iyada oo Man United arkaysay fursado cajiib ah oo kooxdeedu goolal ku wayday.
Juan Mata ayaa darbo laaga xorta ah ku dhalin gaadhay goolka ay kooxdiisu dadaalka badan ku bixisay balse waxa uu arkay darbadiisa oo gool la’aan ku dhamaatay. Halkan ka daawo.
Dhinaca kale Marcus Rashford ayaa birta ku garaacay darbo uu kabtanka kooxda Wolves ee Conor Coady si cajiib ah uga joojiyay waxayna United markale aragtay fursad wayn oo kooxdeeda ka luntay.
Halkan ka daawo muuqaalka qaabkii uu Conor Coady u awooday in uu Marcus Rashford uga beeniyay goolka cadaanka ahaa.
Man United ayaa markale soo dhaafi kari wayday kooxda Wolves waxaana Solskjaer lagu qasbay in uu kulan ku celis ah la ciyaari doono kooxda uu wali ka raadinayo guushiisii ugu horaysay isaga oo tababare ah.
Muuqaal caawiyaha VAR ayaa dhamaadkii ciyaarta kooxda Wolves ka beeniyay gool ay isku arkayeen in ay guul ku gaadheen.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay barbaro gool la’aan ah waxayna taasi keeni doontaa in jadwalka Man United uu cidhiidhi sii galo maadaama oo ay kulan ku celis ah la ciyaari doonaan Wolves dhanka kale Manchester City ayaa si sahlan ugu soo gudubtay wareega xiga ee tartanka FA Cupka kadib markii ay guul wayn ka gaadhay kooxda Port Vale waxayna City sii wadataa in ay difaacato koobka FA Cupka ee ay hore u haysteen.
Man City waxaa guushan wayn ku hogaamiyay xidigaha kala ah O. Zinchenko (20) Sergio Agüero (42) T. Harwood-Bellis (58) iyo Phil Foden (76).
Daqiiqadii 20 aad Man City ayaa heshay goolkeeda furitaanka waxaana goolkan u saxiixay Oleksandr Zinchenko kadib markii uu caawin ka helay Ilkay Gundogan waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay City hogaanka kula wareegtay.
Daqiiqadii 26 aad waxaa dhacday arin qariib ah kadib markii uu David Silva khasaariyay fursad uu goolka Port Vale oo banaan ah uu hortaagnaa laakiin markale Aguero ayaa kubada birta ka soo laabtay ku seegay in uu goolka labaad ku dhaliyo.
Daqiiqadii 35 aad kooxda Port Vale ayaa heshay goolkeeda barbaraha waxaana gool layaableh oo madax ah u saxiixay Pope kaas oo kubbad caawin ka helay D. Amoo waxayna ciyaartu noqotay barbaro 1-1 ah.
Laakiin Sergio Aguero ayaa Man City culayska ka dul qaadya kadib markii uu daqiiqadii 42 aad uu dhaliyay goolka labaad ee City waxaana caawinta goolkan sameeyay da’yarka Phil Foden.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-1 ay Man City hogaanka ku haysay laakiin kooxda yar ee Port Vale ayaa wali doonaysay in ay soo laabto.
Daqiiqadii 58 aad ee qaybtii labaad ee ciyaarta kubbad uu John Stones u qalmay in uu gool ku dhaliyo waxaa ka qaatay T. Harwood-Bellis kaas oo City si buuxda uga dul qaaday cadaadiskii ay kala kulmeen kooxda Port Vale
Laakiin daqiiqadii 76 aad da’yarka Phil Foden ayaa goolka sida rasmiga ah Man City guushan ugu horseeday waxa uu ku dhaliyay kubbad caawin uu ka helay da’yarka Angeliño waxayna ciyaartu noqotay 4-1 ay City ku xaaqayso kooxdii iska caabinta ay kala kulantay ee Port Vale.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 4-1 ay Man City ku xasuuqday kooxda yar ee Port Vale iyada uu soo baxday wareega xidiga ee koobka ay difaacanayso ee FA Cupka.